किन बन्द भयो मुन्द्रेको कमेडी क्लब ? खास कारण यस्तो - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
किन बन्द भयो मुन्द्रेको कमेडी क्लब ? खास कारण यस्तो
एक सय ३२ शृंखला सकेर अन्ततः जितु नेपालले सञ्चालन गरेको मुन्द्रेको कमेडी क्लब पनि बन्द भएको छ। सञ्चारमध्यममा आएजस्तो यो सो बन्द हुनुमा कार्यक्रमकी एक पात्र फुलन्देकी आमाको धोका भनिएको छ। तर, यसका पछाडि धेरै कारण रहेको जितु नेपालले दिएको अभिव्यक्तिबाट पनि प्रष्ट हुन आउँछ।
सो बन्द गरिएकोबारे सञ्चालक जितुले पत्रकारहरूलाई जानकारी गराए। उनले पत्रकारहरूसँग भने, ‘म एउटा छुट्टै अनुभवसहित बिदा हुँदैछु ।’ उनले सो कार्यक्रममा सो बन्द हुनुमा पहिलो नम्बरमा फुलन्देकी आमा (उमेश राई)को धोकालाई पहिलो बुँदामा राख्दै अन्य कारण पनि भएको भाव दिए। सोमबार बेलुकी ‘मुन्द्रको कमेडी क्लब’को अन्तिम एपिसोड प्रसारण भएको थियो ।
केही दिनअघि मात्र यो सो बन्द हुने बताइएको थियो। त्यसको एक मात्र कारण फुलन्देकी आमा भनेर जितुले भन्दै आइरहेका थिए। अन्तिम शृंखला सुरु हुनुअघि पनि बन्द गर्नुपर्ने कारण उनै भएको जोड जितुको थियो।
उनले भनेका छन्, ‘उमेश अन्यत्र काम गर्न लागेको सुनेको थिएँ, पत्यार लागेन अनि फोन गरेर सोधें।’ र, अन्त्यमा उमेशले उता सहमति गरिसकेको छु भनेपछि आफू चुप बसेको उनले सुनाएका थिए। र, फुलन्देकी आमा प्रमुख कारक भएपनि यसभित्र अन्य थप समस्या आइपरेको पनि उनले आफ्नो अभिव्यक्तिबाट प्रष्टिन्छ।
जितुलाई सो सुरु गर्दा नै नकारात्मक टिप्पणी आएको थियो। उनलाई भारती कमेडियन कपिल शर्माको सो को नक्कल गरेको आरोप खेप्नु परेको थियो । तर, उनले त्यतिबेला हार नमानेको बताए।
अर्को सो सुटिङ गर्ने सेटको अभाव भएको बुझिएको छ। सुटिङ गर्नलाई स्थायी सेट नहुँदा निकै समस्या परेको अभिव्यक्ति जितुले दिएका छन्। यसबाट उनले हैरानी खेप्नुपरेको थियो। जसकारण धेरै शृंखला एकै दिन सुटिङ गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आएको थियो।
सो को सुरु सुरुका शृंखलाको सुटिङ पर्यटन बोर्डको हलमा भएको थियो । महामारीपछि भ्वाइस अफ नेपाल त कहिले कमेडी च्याम्पियनको सेटमा यो सो को गरिएको हो।
सो एक सय ३२ एपिसोड चल्यो। यो मनोरञ्जनात्मक सो भएकाले अतिथिका लागि समस्या परेको अर्को कारण हो। ‘अतिथि दोहोरिने समस्या आयो, कार्यक्रममा बोलाउँदा पनि म आइसकें अरुलाई बोलाउनू भन्ने जवाफ आउन थाल्यो।’ उनको दुखेसो थियो।
जितुले स्क्रिप्ट लेख्नेदेखि अतिथि बोलाउने, पैसा जुटाउनेसम्म काम आफै गर्थे । यसबाट उनले तनाव पनि झेलेका थिए। सो बन्द हुनुका पछाडि अर्को कारण हुनसक्ने जितुको संकेत र अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ।
यस्तो निर्णयको पछि पुग्नमा कि एडभरटाइजिंगको भूमिका रहेको दखिन्छ। जितुले कि को दोहोरो चलखेल भएको तर्फ संकेत गरे।